About Us - Haiwen Bio-Technology Co., Ltd
Pharmaceutical qaydhiin Qalabka
Shirkadda ayaa dhisay qalabka dhirta caadiga ah la mashiinada sare. Waxaan leenahay QA dhamaystiran oo nidaamka QC iyo HPLC u gaar ah, GC iyo spectrophotometer UV si ay u falanqeeyaan iyo xakameeyo tayada badeecada.
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dareere cortical Oral steroid, steroids Anti-Estrogen, steroids SARMs, hormone lab iyo dhaddig galmada, peptides iyo budada steroid sida Trenbolone copolymer, Boldenone Undecylenate, Drostanolone Propionate, Nandrolone Decanoate, Methenolone Enanthate, Hormoonkaas Enanthate, Hormoonkaas Cypionate, Tetracaine, Linocaine, Benzocaine, MT-1 iyo wixii la mid ah.
Xagga cilmi-baarista iyo aqoonta budo steroid dhiska, waxa aan u soo saarta oo qeybinayay ammaan, si fiican-fulinta iyo steroids tayo sare leh si loo daboolo baahiyaha dunida a sii kordhaya. Waxaan qotomiyey iskaashi adag shirkadaha kiimikada iyo dawooyinka keentay badan ee Shiinaha. Our ganacsi ku faafo meelo badan oo ay ku jiraan beerta gym, rugta caafimaadka, machadka, warshado dawooyinka iyo wixii la mid ah. Waxaan rajaynaynaa in la dhiso xiriir ganacsi muddada-dheer macaamiisha adduunka oo dhan.
Cinwaanka: 18F, dhismaha Guanghao, Meilong Road, Degmada Longhua, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha
Qofka lala xiriiri karo: Mrs. Cathy
Saxiix Up Waayo Our Newsletter
18F, dhismaha Guanghao, Meilong Road, Degmada Longhua, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha